June 2018 - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အင်္ကျီအရောင်ကနေ သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောပြနေတဲ့ အကြောင်းများ
လူတိုင်း ထသွားထလာ ဝတ်ဆင်ကျတဲ့ အင်္ကျီအရောင်တွေရှိကျပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အင်္ကျီအရောင်ဟာ အသက်၊ ရာသီဥတု၊ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်း၊ ခံစားချက်နှင့် အခြားအရာတွေပေါ်မှာလည်းပဲ မူတည်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ လူဦးရေအများစုအတွက် အရင်ထဲက သီးခြား အရောင်တွေ အများအပြားရှိခဲ့တယ်။သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အရောင်တွေကနေ သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ပြောပြနေတဲ့ အကြောင်းကို သင်သိလား? မသိသေးဘူးဆိုရင် ဘယ်လို အရောင်တွေကသင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ဖော်ပြပေးလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။
အနီရောင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ လိုအင်ဆန္ဒနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှု ပြင်းပြပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှို့ဝှက်ချက် ထားလေ့မရှိဘူး။ တစ်ဦးတည်း ယှဉ်ပြိုင် လှုပ်ရှားတတ်ပြီး တက်တက်ကြွကြွ နေတတ်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အနီရောင်ကို နှစ်သက်စွဲလမ်းတဲ့သူဆိုလျှင် တစ်ဇွတ်ထိုးဆန်ဆန် ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော လူများဟာကြောက်ရွံ့မှုမရှိပဲ သူတို့တွေရဲ့အိပ်မက်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဖန်တီးပြီး အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်သူဖြစ်တယ်။ မကြာခဏ ဒေါသထွက်လေ့ရှိတယ်။ အလွန်သစ္စာရှိပြီး ညီတူညီမျှ ဆက်ဆံတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာအပြာရင့်ရောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုလျှင် သင်ဟာအခွင့်အရေးတွေကို အဆုံးအရှုံးမခံဘဲ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားတတ်သူဖြစ်တယ်။ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ နေတတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်။
သင်ဟာ တစ်ခြားအရောင်တွေထက် အဖြူရောင်ကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ နူးညံ့တဲ့စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ အဖြူရောင်ဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ အရောင်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းရဲ့ အဝတ်ဗီရိုထဲမှာ အဖြူရောင်မရှိဘူးဆိုတာ ရှားလှပါတယ်။ အဖြူရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေက အခွင့်အလမ်းတွေကို ရှာဖွေတတ်ပြီး နေရာတိုင်းမှာ အကောင်းမြင်စိတ် ထားတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ခရမ်းရောင်ဟာ အနီနဲ့အပြာကို ရောစပ်ထားတဲ့ အရောင်ဖြစ်တယ်။ ခရမ်းရောင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေက တစ်စုံတစ်ခုပေါ်မှာ စိတ်ခံစားမှုလွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့က လူတွေအားလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကိုမြင်နိုင်ဖို့ အတွက် ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လူတွေဖြစ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။
ပန်းရောင်ဟာ နူးညံ့ပြော့ပြောင်းပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ အရောင်ဖြစ်တယ်။ ပန်းရောင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သနားကြင်နာတတ်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်နှစ်သက်သူတွေက လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးလူတွေဟာ ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်ပြီး သြဇာအာဏာကြီးမားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ အမြဲမြဲလိုလို ယုံကြည်ချက်တွေ ခိုင်မာအောင်လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နည်းလမ်းတွေရှာဖွေတတ်တယ်။
အဝါရောင်မြတ်နိုးသူတွေဟာ ရင်းနှီးခင်မင်တတ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကျတယ်။ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်တတ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကျတယ်။
အပြာနုရောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ များသောအားဖြင့် အပြာနုရောင်ကအများဆုံးပါပဲ။ အပြာနုရောင်ကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ တောင်းဆိုချက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီးမရှိဘူး။ လူအများနဲ့ ရောရောနှောနှော နေတတ်လေ့ရှိကျတယ်။
အနက်ရောင်ဟာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အရောင်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်လည်း ဖြစ်တယ်။ အနက်ရောင်ကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ အလွန်လျှို့ဝှက်တတ်ပြီး သဘာဝကို ဆန့်ကျင်တတ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ စတိုင်ကျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
မီးခိုးရောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေဟာ မကြာခဏ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တတ်ပြီး ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး နေတတ်ကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရာမှာသေချာအာရုံစိုက် ကြိုးစားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ ကြွားဝါတတ်သူတွေလည်းမဟုတ်သလို ခံစားချက်တွေကိုလည်းမျိုသိပ်မထားဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်သူတွေဖြစ်တယ်။
အခုပြောပြပေးလိုက်တဲ့ အရောင်တွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားက ဘာလဲဆိုတာ သိပြီးလောက်ပြီပေါ့နော်။
သငျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အကငြ်္ီအရောငျကနေ သငျ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားကို ပွောပွနတေဲ့ အကွောငျးမြား
လူတိုငျး ထသှားထလာ ဝတျဆငျကတြဲ့ အကငြ်္ီအရောငျတှရှေိကပြါတယျ။ သငျရှေးခယျြလိုကျတဲ့ အကငြ်္ီအရောငျဟာ အသကျ၊ ရာသီဥတု၊ ဖကျရှငျရစေီးကွောငျး၊ ခံစားခကျြနှငျ့ အခွားအရာတှပေျေါမှာလညျးပဲ မူတညျနပေါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကယျြပွနျ့လှတဲ့ လူဦးရအေမြားစုအတှကျ အရငျထဲက သီးခွား အရောငျတှေ အမြားအပွားရှိခဲ့တယျ။သငျရှေးခယျြလိုကျတဲ့ အရောငျတှကေနေ သငျ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားတှကေို ပွောပွနတေဲ့ အကွောငျးကို သငျသိလား? မသိသေးဘူးဆိုရငျ ဘယျလို အရောငျတှကေသငျ့ရဲ့ စိတျနစေိတျထားကို ဖျောပွပေးလဲဆိုတာကို ပွောပွပေးပါမယျ။
အနီရောငျကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှဟော လိုအငျဆန်ဒနှငျ့ စိတျအားထကျသနျမှု ပွငျးပွပွီး ဘယျသူ့ကိုမှ လြှို့ဝှကျခကျြ ထားလမေ့ရှိဘူး။ တဈဦးတညျး ယှဉျပွိုငျ လှုပျရှားတတျပွီး တကျတကျကွှကွှ နတေတျတဲ့သူ ဖွဈတယျ။ အကယျ၍ သငျဟာ အနီရောငျကို နှဈသကျစှဲလမျးတဲ့သူဆိုလြှငျ တဈဇှတျထိုးဆနျဆနျ ပွုလုပျလရှေိ့တယျ။ ထိုကဲ့သို့သော လူမြားဟာကွောကျရှံ့မှုမရှိပဲ သူတို့တှရေဲ့အိပျမကျကို အကောငျထညျဖျောဖနျတီးပွီး အခကျအခဲတှကေို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးတတျသူဖွဈတယျ။ မကွာခဏ ဒေါသထှကျလရှေိ့တယျ။ အလှနျသစ်စာရှိပွီး ညီတူညီမြှ ဆကျဆံတတျသူဖွဈပါတယျ။
အကယျ၍ သငျဟာအပွာရငျ့ရောငျကို ကွိုကျနှဈသကျသူဆိုလြှငျ သငျဟာအခှငျ့အရေးတှကေို အဆုံးအရှုံးမခံဘဲ မဆုတျမနဈကွိုးစားတတျသူဖွဈတယျ။ တညျငွိမျအေးဆေးစှာ နတေတျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိသူ တဈဦးလညျးဖွဈတယျ။
သငျဟာ တဈခွားအရောငျတှထေကျ အဖွူရောငျကို နှဈသကျတယျဆိုရငျ သငျဟာ နူးညံ့တဲ့စိတျထားပိုငျဆိုငျတဲ့သူဖွဈတယျ။ အဖွူရောငျဟာ တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့ အရောငျဖွဈပွီး လူတိုငျးရဲ့ အဝတျဗီရိုထဲမှာ အဖွူရောငျမရှိဘူးဆိုတာ ရှားလှပါတယျ။ အဖွူရောငျကွိုကျနှဈသကျသူတှကေ အခှငျ့အလမျးတှကေို ရှာဖှတေတျပွီး နရောတိုငျးမှာ အကောငျးမွငျစိတျ ထားတတျတဲ့ သူတှဖွေဈပါတယျ။
ခရမျးရောငျဟာ အနီနဲ့အပွာကို ရောစပျထားတဲ့ အရောငျဖွဈတယျ။ ခရမျးရောငျနှဈသကျတဲ့သူတှကေ တဈစုံတဈခုပျေါမှာ စိတျခံစားမှုလှယျတဲ့သူတှဖွေဈတယျ။ သူတို့က လူတှအေားလုံးကို လှမျးမိုးနိုငျပွီးတော့ သူတို့ရဲ့ စိတျကိုမွငျနိုငျဖို့ အတှကျ ခနျ့မှနျးရခကျပါတယျ။ယဘေုယအြားဖွငျ့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ လူတှဖွေဈပွီး ပေါငျးသငျးဆကျဆကျဆံရေးကောငျးတဲ့သူတှဖွေဈတယျ။
ပနျးရောငျဟာ နူးညံ့ပွော့ပွောငျးပွီး အေးခမျြးလှတဲ့ အရောငျဖွဈတယျ။ ပနျးရောငျကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှဟော ငွိမျးခမျြးရေးကို မွတျနိုးတဲ့သူဖွဈတယျ။ သနားကွငျနာတတျပွီး တဈယောကျထဲ အေးအေးဆေးဆေး နထေိုငျတတျသူတှဖွေဈပါတယျ။
အစိမျးရောငျနှဈသကျသူတှကေ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ အဲ့လိုမြိုးလူတှဟော ယုံကွညျခကျြပွငျးထနျပွီး သွဇာအာဏာကွီးမားတဲ့သူတှဖွေဈတယျ။ အမွဲမွဲလိုလို ယုံကွညျခကျြတှေ ခိုငျမာအောငျလို့ သူတို့ကိုယျသူတို့ နညျးလမျးတှရှောဖှတေတျတယျ။
အဝါရောငျမွတျနိုးသူတှဟော ရငျးနှီးခငျမငျတတျပွီး အေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့ ဘဝကို ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွတျသနျးတဲ့သူတှေ ဖွဈကတြယျ။ လှတျလပျစှာနထေိုငျတတျပွီး ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျတဲ့သူတှလေညျးဖွဈကတြယျ။
အပွာနုရောငျကို ကွိုကျနှဈသကျတဲ့သူတှဟော သူတို့ရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ မြားသောအားဖွငျ့ အပွာနုရောငျကအမြားဆုံးပါပဲ။ အပွာနုရောငျကို နှဈသကျတဲ့သူတှဟော တောငျးဆိုခကျြတှေ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အမြားကွီးမရှိဘူး။ လူအမြားနဲ့ ရောရောနှောနှော နတေတျလရှေိ့ကတြယျ။
အနကျရောငျဟာ ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံး အရောငျဖွဈပွီး လူတိုငျးနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့အရောငျလညျး ဖွဈတယျ။ အနကျရောငျကို နှဈသကျတဲ့သူတှဟော အလှနျလြှို့ဝှကျတတျပွီး သဘာဝကို ဆနျ့ကငျြတတျတဲ့သူတှလေညျးဖွဈတယျ။ စတိုငျကပြွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိသူတှဖွေဈပါတယျ။
မီးခိုးရောငျကို ကွိုကျနှဈသကျသူတှဟော မကွာခဏ ကွောကျရှံ့စိုးရိမျတတျပွီး ပုနျးလြှိုးကှယျလြှိုး နတေတျကတြယျ။ ဒါပမေဲ့ အလုပျတဈခုကို လုပျရာမှာသခြောအာရုံစိုကျ ကွိုးစားတဲ့သူတှဖွေဈတယျ။ သူတို့ဟာ ကွှားဝါတတျသူတှလေညျးမဟုတျသလို ခံစားခကျြတှကေိုလညျးမြိုသိပျမထားဘဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတတျသူတှဖွေဈတယျ။
အခုပွောပွပေးလိုကျတဲ့ အရောငျတှထေဲက ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့အရောငျနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့စိတျနစေိတျထားက ဘာလဲဆိုတာ သိပွီးလောကျပွီပေါ့နျော။
test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t test tes t
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ ဇွန်လ ၂၅ မှ ဇူလိုင် ၁)
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲသာလုပ်ပေတော့။ ငွေအားလူအားရှိသလောက် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း အလွန်ရွှင်နေမယ်။ ဟိုကဝင် ဒီကဝင် ဝင်နေမယ်။ ဘာသာရေးလုပ်လေလေ ကံကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမများနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆောက်အဦးအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ခေါင်းခံဖြေရှင်း ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အစီအစဉ်ပျက်မတတ် ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေရှိခဲ့ရင် ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက်သွားမယ်။ အဲဒီ့လိုပဲ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခုဟာလည်း သူ့အလိုလို ရှင်းသွားပါမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ရှောက်ယိုကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ထွက်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာမယ်။ ရပ်ထားရတဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ရမယ်။ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံမယ်။ လုပ်ငန်းဟောင်း၊ နေရာဟောင်း၊ လူဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုပါလေ။ ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပျက်တတ်၊ ပျောက်တတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအဝယ်၊ အရောင်းကိစ္စတစ်ခု လွဲချော်သွားလိမ့်မယ်။ မနာလိုသူလည်း ပေါလိမ့်မယ်။ တမင်ရန်စ နှောင့်ယှက်တာမျိုးတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မတင်မကျအခြေအနေတွေ ကြုံလာမယ်။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာချုပ်မှားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အဖိုးတန် ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေ ဝင်လာမယ်။ ကျန်းမာရေးညံ့နေသူတွေ ပြန်ပြီး နာလန်ထလိမ့်မယ်။ ရေချိုးမှားတာ၊ အပူလောင်တာတွေတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်မယ်။ ရပ်ဝေးလူကြီးတွေက ကူညီမယ်။ ကောင်းသော ခရီးတွေ သွားရတတ်ပါတယ်။ ငွေအတွက်လည်း စိတ်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၉/၃။ ကံ၏ အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ယို ၉ မျိုးကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာ ဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစု အတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမား လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ် တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သရက်ယိုကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ၊ ကြံသမျှ ထစ်ငေါ့ကြန့်ကြာပြီးမှ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုကြီးမျိုးတွေ ရတတ်ပါတယ်။ အပင်ပမ်းခံပြီး အကျိုးထူးခံစားရမယ့် ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်း အထွက်ကြမ်းဖြစ်နေမယ်။ ထီကိန်း ထီကံကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ဒုက္ခက ကိုယ့်ဒုက္ခဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်၊ ဒူး၊ ခါး ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရ တတ်တယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက်ခံရတတ်တယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အနီးကပ်လူသုံးဦး ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမယ်။ အောက်လက် ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်။ မိသားစုထဲက ရပ်ဝေးခရီးသွားတာ၊ ရပ်ဝေးက အိမ်သူအိမ်သား ပြန်ရောက် လာတာ၊ ရပ်ဝေးကြီးကဲသူ ဆရာသမားတို့ရဲ့ သတင်းကောင်းကြားတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဆိုလျှင် မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ကျောက်ကျောကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ ဒုက္ခဆိုသလို ဖြစ်နေမယ်။ အင်မတန် ရန်အန္တရာယ်များတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပ်မှာလည်း အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်တွေ အများကြီးကြုံမယ်။ မကူညီချင်တဲ့အပြင် ဒုက္ခပေးမယ့်လူတွေ တန်းစီနေတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဆွေမျိုးလို ဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သစ္စာဖောက်ကြလိမ့်မယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေကလည်း အမြင်စောင်းလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါး ပြဿနာကြားမှာ ညပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အကြပ်ကိုင် ဒုက္ခပေးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ ဧည့်သည်တွေ၊ သတင်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အကြပ်အတည်းတွေကြားထဲကပဲ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်လာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာရတာ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတာ၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကြုံတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဦးခေါင်းပိုင်း ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်။ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တာ ခြေထောက်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ထောပတ်ထမင်းကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းပြောင်းတာ၊ အသစ်စတာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စအတွက်တော့ စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ဆရာသမား လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကြီးကဲသူတွေနဲ့ အခန့်မသင့်ဖြစ်တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အထစ် အငေါ့အနှောက်အယှက်များနေတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ရတတ် တယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကြီးကဲသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီး အဆင်မပြေကြီးစွာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ရပ်ဝေကပစ္စည်းတွေ ဝင်တတ်တယ်။ ခက်ခဲထစ်ငေါ့နေတဲ့ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စတွေ အောင် မြင်သွားမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေရဲ့ ထိရောက်သောအကူအညီကောင်းတွေရရှိမယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အဆင်ပြေမယ်။ ထီပေါက်သလို ငွေတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လူနာဧည့်သည်ကို ကူညီရတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေရင်းထဲက ကြီးကဲသူတစ်ဦး အမှုအခင်းကြုံတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ မုန့်ဖက်ထုပ်ကပ်လှူပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ အိမ်မကပ်ချင်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ လုပ်သမျှ ပြောသမျှ အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မနာလိုသူ နှောက်ယှက်သူလည်း အလွန်ပေါမယ်။ အထူးသဖြင့် ဆွေမျိုးရင်း တွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရတတ်တဲ့ ကာလမျိုးပါပဲ။ အိမ်ကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စအစီအစဉ်တွေလည်း လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေက မကောင်းမြင် အထင်လွဲကြလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်ဖို့ရောင်းဖို့ကိစ္စ မတင်မကျကြီး ဖြစ်နေမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေ အိမ်က ထွက်သွားတတ်တယ်။ စကားများဖြေရှင်းရတာ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စတွေ ထစ်ငေါ့နေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ ဝမ်းသာစရာ စာတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အခြေအနေကောင်းကြုံ မယ်။ ဆရာကောင်း၊ သမားကောင်းတွေ တွေ့တတ်တယ်။ ပညာကောင်းတွေ ရတတ်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး အထစ်အငေါ့တွေ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ရပ်ထားရတဲ့အလုပ်တွေ၊ လုပ်ငန်း အဟောင်းတွေ ပြန်လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးပြီလို့ ထင်ထားတဲ့အရာတွေ ပြန်ရလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကပ်လှူပါလေ။
ကောင်းတဲ့ မနောကံ ၃ ဆ ပြန် ….
“တချို့ အိမ်တွေ၊ ဆိုင်တွေမှာ အ၀င်လမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီး မှန်လေးတွေ ချိတ်ထားကြတာ တွေ့ဖူးတယ် မဟုတ်လား၊
မှန်ရဲ့သဘောက အဖြူလာရင် အဖြူတိုင်းပြန်တယ်၊ အမည်းလာရင် အမည်းတိုင်း ပြန်သွားမယ် …၊ ကိုယ့်ကို ကူညီပံ့ပိုးမယ့် မေတ္တာသမားလာမလား၊ မေတ္တာဓာတ် ပြန်သွားမယ်၊ မဟုတ်တာ မကောင်းတာ လာကြံစည်ရင်လည်း မကောင်းတာတွေ ပြန်သွားမယ် …၊ တန်ပြန်သဘောမျိုးနဲ့ ချိတ်ကြတာ၊
ပြီးတော့ မှန်မှာအရိပ်ထင်ပြီး အရောင်ဟပ်တယ် မဟုတ်လား …၊ နှစ်ဆနှစ်ဆ တိုးစေတဲ့ဓာတ်ကို ယူပြီးတော့လည်း မှန်ကိုချိတ်ကြတာ …၊
တစ်ခုရှိတာက တချို့ ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံ ရန်လုပ်သူတွေဟာ မျက်နှာကတော့ ပြုံးပြုံးနဲ့ပါပဲ …၊ ပြီးတော့မှ မဟုတ်တာတွေ၊ မကောင်းတာတွေ ကြံစည်သွားကြတာ …၊ သူတို့ကျတော့ မှန်လည်း မျက်စိလည်သွားတယ် …၊
ကိုယ့်ကို ကူညီမယ့်လူလို့ပဲ အောက်မေ့နေတော့တာပေါ့ …၊
အဲဒီတော့ အီဂျစ်လောကီပညာရှင်တွေဟာ မှန်မှာ အဲဒီ တတိယမျက်လုံးတံဆိပ်လေးပါ ကပ်ပြီး သုံးလေ့ရှိကြတယ် …၊
မှန်နဲ့ အဲဒီတံဆိပ်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးဆ ပြန်စေသတဲ့ …။
ကိုယ့်ကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့လူ ကိုယ့်ဆီကမေတ္တာ သုံးဆပြန်သွားမယ် ..၊ ၀င်ငွေလာဘ်လာဘတွေလည်း သုံးမျိုးသုံးဆ တိုးစေမယ် …။
အေး …မဟုတ်တာ လာကြံစည်ရင်လည်း သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံ သုံးဆခံပေတော့ပဲ …။
အဲဒီတော့ အပြိုင်အဆိုင် အနှောင့်အယှက်ပေါတဲ့ ဆိုင်တွေ၊ အိမ်တွေ၊ အလုပ်ခန်းတွေ၊ ရုံးခန်းတွေမှာ
အ၀င်လမ်းဘက်ကို လှည့်ပြီး မှန်လေးတစ်ချပ် ချိတ်ထားပြီး အဲဒီမှန်မှာ တတိယမျက်လုံးတံဆိပ်လေးပါ ကပ်ထားလိုက်ရတယ် …”
ကောငျးတဲ့ မနောကံ ၃ ဆ ပွနျ ….
“တခြို့ အိမျတှေ၊ ဆိုငျတှမှော အဝငျလမျးဘကျကိုလှညျ့ပွီး မှနျလေးတှေ ခြိတျထားကွတာ တှဖေူ့းတယျ မဟုတျလား၊
မှနျရဲ့သဘောက အဖွူလာရငျ အဖွူတိုငျးပွနျတယျ၊ အမညျးလာရငျ အမညျးတိုငျး ပွနျသှားမယျ …၊ ကိုယျ့ကို ကူညီပံ့ပိုးမယျ့ မတ်ေတာသမားလာမလား၊ မတ်ေတာဓာတျ ပွနျသှားမယျ၊ မဟုတျတာ မကောငျးတာ လာကွံစညျရငျလညျး မကောငျးတာတှေ ပွနျသှားမယျ …၊ တနျပွနျသဘောမြိုးနဲ့ ခြိတျကွတာ၊
ပွီးတော့ မှနျမှာအရိပျထငျပွီး အရောငျဟပျတယျ မဟုတျလား …၊ နှဈဆနှဈဆ တိုးစတေဲ့ဓာတျကို ယူပွီးတော့လညျး မှနျကိုခြိတျကွတာ …၊
တဈခုရှိတာက တခြို့ ကိုယျ့ကို မကောငျးကွံ ရနျလုပျသူတှဟော မကျြနှာကတော့ ပွုံးပွုံးနဲ့ပါပဲ …၊ ပွီးတော့မှ မဟုတျတာတှေ၊ မကောငျးတာတှေ ကွံစညျသှားကွတာ …၊ သူတို့ကတြော့ မှနျလညျး မကျြစိလညျသှားတယျ …၊
ကိုယျ့ကို ကူညီမယျ့လူလို့ပဲ အောကျမနေ့တေော့တာပေါ့ …၊
အဲဒီတော့ အီဂဈြလောကီပညာရှငျတှဟော မှနျမှာ အဲဒီ တတိယမကျြလုံးတံဆိပျလေးပါ ကပျပွီး သုံးလရှေိ့ကွတယျ …၊
မှနျနဲ့ အဲဒီတံဆိပျလေးနဲ့ပေါငျးလိုကျရငျ ကောငျးတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆိုးတာပဲဖွဈဖွဈ သုံးဆ ပွနျစသေတဲ့ …။
ကိုယျ့ကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့လူ ကိုယျ့ဆီကမတ်ေတာ သုံးဆပွနျသှားမယျ ..၊ ဝငျငှလောဘျလာဘတှလေညျး သုံးမြိုးသုံးဆ တိုးစမေယျ …။
အေး …မဟုတျတာ လာကွံစညျရငျလညျး သူ့ထိုကျနဲ့သူ့ကံ သုံးဆခံပတေော့ပဲ …။
အဲဒီတော့ အပွိုငျအဆိုငျ အနှောငျ့အယှကျပေါတဲ့ ဆိုငျတှေ၊ အိမျတှေ၊ အလုပျခနျးတှေ၊ ရုံးခနျးတှမှော
အဝငျလမျးဘကျကို လှညျ့ပွီး မှနျလေးတဈခပျြ ခြိတျထားပွီး အဲဒီမှနျမှာ တတိယမကျြလုံးတံဆိပျလေးပါ ကပျထားလိုကျရတယျ …”
ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့အထိ
ဒီကာလအတွင်း အလုပ်ကိစ္စတွေများနေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပင်ပန်းစရာ လူပင်ပန်းစရာတွေလဲ ကြုံရတွေ့ ရတတ်ပါတယ်။ မိမိက လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်ကြီးကြီးယူထားသူဆို အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရပါ လိမ့်မယ်။ လိုတာထက်ပိုပြီး အပင်ပန်းခံရမယ်ဆိုပါက အနားယူချိန်ကိုလဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားပါလို့ ပြောချင် ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများ တိုးတတ်နိုင်ပေမဲ့ ရောင်းမှားဝယ်မှားမဖြစ်အောင်သတိထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါ တယ်။ ကျန်းမာရေးလဲ အရင်ကထက်ပိုဂရုစိုက်ပါ။ ရောဂါကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့ ပန်းဖျားဖျားတာမျိုးတွေ ကြုံရ တတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းများအလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ငွေသုံးစွဲမှုများလဲ စနစ်ကျဖို့လိုပါတယ်။ အချစ်ရေးအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်အလုပ်နဲ့ကိုယ် အချစ်ရေးကို အာရုံမစိုက်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကတော့ မိမိရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကပဲ တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
မိမိအတွက်တော့ ဒီကာလဟာကံကောင်းခြင်းတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်။ စေတနာပိုသူအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေ ပါလိမ့်မယ်။ အဓိကတော့ ငွေကြေးလာဘ်လာဘတွေအထူးဝင်တတ်ပါတယ်။ ငွေအစုလိုက်ဝင်နိုင်တဲ့ ကာလထဲ ရောက်နေပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစုပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်များ၊ လူများနဲ့တတ်ညီလက်ညီလုပ်ရတဲ့စီးပွားရေး များလဲအထူးပဲအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ စပ်တူအလုပ်များအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ ပရဟိတအလုပ်များ လူမှုရေးကိစ္စများ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရတာမျိုးလဲ ကြုံရဆုံရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အညံ့အဆိုးနည်း သွားပါပြီ။ ရောဂါဝေဒနာတွေလဲသက်သာခွင့် ရပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ အနည်းငယ်အားနည်းနေ ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကတော့ ချစ်သူနဲ့ အလုပ်ကြောင့် ခဏတာဝေးနေပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအထူးကောင်းနေ ပါလိမ့်မယ်။ သင်ယူလွယ်တတ်မြောက်လွယ်တဲ့ကာလလို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
အရာရာတိုင်း မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲ ဦးစားပေးထားစေချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့စကားကိုမှနားမယောင်မိပါ စေနဲ့။ စပ်တူအလုပ်ရှယ်ယာအလုပ်များလုံးဝမကောင်းသေးပါဘူး။ မည်သူ့ဆီမှအကြံမတောင်းတာအကောင်းဆုံး ပါပဲ။ ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတဲ့လုပ်ငန်းများ ဒီကာလမှာအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်သစ် စီးပွားသစ် စလိုက်မိပါက ဒီကာလမှာသေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်းဆိုတာမျိုးလို ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအားနည်း နေတတ်တဲ့အတွက် ဂရုစိုက်ပေးလိုက်ပါ။ မိမိကျန်းမာရေးကတော့ ၀မ်းဗိုက်အစာအိမ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး သတိထား ရပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ထဲမှာ ငွေအရမ်းမြုပ်နေရင်ပြန်ဖော်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ အကောင်းဆုံး ကာလထဲရောက်နေတာပါ။အချစ်ရေးမှာတော့ မလွန်ကျူးမိပါစေနဲ့။ မဖုံနိုင်မဖိနိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုး တွေ့ရကြုံရတတ်တဲ့ ကာလထဲရောက်နေချိန်မို့ပါပဲ။ ပညာရေးအထူးကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုကိုစတင်သင်ကြားဖို့ အကောင်းဆုံးကာလပါပဲ။
အဘက်ဘက်ကတိုးတတ်အောင်မြင်နေမဲ့အချိန်ပါ။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးအထူးကောင်းပါ လိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဈေးဆိုင်များ ဖောက်သည်သစ်တိုးခြင်း ၊လူကျခြင်းမျိုးလဲ ကြုံရတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရပါလိမ့်မယ်။ အဆက် အသွယ်ကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။ ဒီကာလမှာခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေလဲ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ၀န်ထမ်းများအလုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး နယ်ခရီးသွားရခြင်းမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအကောင်းဘက်မှာရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ကျမှရေချိုးခြင်း ခေါင်းလျှော်ခြင်းမျိုးတွေ မလုပ်မိပါစေနဲ့။ အိမ်ထောင်ရေးသာယာပျော်ရွှင်မဲ့ကာလပါပဲ။ အတူနေ မောင်နှမတွေနဲ့ အဆင်မပြေတာမျိုးတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကတော့ ချစ်သူရဲ့ဂရုဏာအကြင်နာ တွေကိုရရှိမဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာရေးအထူးကောင်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အိမ်စာအတူတူလုပ်တာမျိုးကစာပို ရတတ်တဲ့အချိန်ပါ။
21.6.2018 မှ 27.6.2018 အထိ တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
ဒီကာလအတှငျး အလုပျကိစ်စတှမြေားနပေါလိမျ့မယျ။ စိတျပငျပနျးစရာ လူပငျပနျးစရာတှလေဲ ကွုံရတှေ့ ရတတျပါတယျ။ မိမိက လုပျငနျးခှငျတာဝနျကွီးကွီးယူထားသူဆို အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စမြားကို ဆုံးဖွတျခကျြခနြရေပါ လိမျ့မယျ။ လိုတာထကျပိုပွီး အပငျပနျးခံရမယျဆိုပါက အနားယူခြိနျကိုလဲ သတျသတျမှတျမှတျထားပါလို့ ပွောခငျြ ပါတယျ။ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးမြား တိုးတတျနိုငျပမေဲ့ ရောငျးမှားဝယျမှားမဖွဈအောငျသတိထားဖို့တော့ လိုအပျပါ တယျ။ ကနျြးမာရေးလဲ အရငျကထကျပိုဂရုစိုကျပါ။ ရောဂါကွီးကွီးမားမားမရှိပမေဲ့ ပနျးဖြားဖြားတာမြိုးတှေ ကွုံရ တတျပါတယျ။ ဝနျထမျးမြားအလုပျနဲ့ပကျသကျပွီး အပွောငျးအလဲကွုံရတတျပါတယျ။ ကိုယျပိုငျငှသေုံးစှဲမှုမြားလဲ စနဈကဖြို့လိုပါတယျ။ အခဈြရေးအဆငျပွနေိုငျပမေဲ့ ကိုယျအလုပျနဲ့ကိုယျ အခဈြရေးကို အာရုံမစိုကျနိုငျတာမြိုး ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကတော့ မိမိရဲ့စိုးရိမျစိတျကပဲ တှနျးအားတဈခုဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
ယတွာ မွပေဲလေးကွျောပွီး ဘုရားကပျလှူပါ။
မိမိအတှကျတော့ ဒီကာလဟာကံကောငျးခွငျးတှရှေိနပေါလိမျ့မယျ။ စတေနာပိုသူအတှကျ ပိုမိုအဆငျပွေ ပါလိမျ့မယျ။ အဓိကတော့ ငှကွေေးလာဘျလာဘတှအေထူးဝငျတတျပါတယျ။ ငှအေစုလိုကျဝငျနိုငျတဲ့ ကာလထဲ ရောကျနပေါတယျ။ အသငျးအဖှဲ့နဲ့ပေါငျးစုပွီး လုပျရတဲ့အလုပျမြား၊ လူမြားနဲ့တတျညီလကျညီလုပျရတဲ့စီးပှားရေး မြားလဲအထူးပဲအကြိုးပေးအောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။ စပျတူအလုပျမြားအကြိုးပေးပါလိမျ့မယျ။ ပရဟိတအလုပျမြား လူမှုရေးကိစ်စမြား ကူညီလုပျကိုငျပေးရတာမြိုးလဲ ကွုံရဆုံရတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အညံ့အဆိုးနညျး သှားပါပွီ။ ရောဂါဝဒေနာတှလေဲသကျသာခှငျ့ ရပါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျရေးကတော့ အနညျးငယျအားနညျးနေ ပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးကတော့ ခဈြသူနဲ့ အလုပျကွောငျ့ ခဏတာဝေးနပေါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးအထူးကောငျးနေ ပါလိမျ့မယျ။ သငျယူလှယျတတျမွောကျလှယျတဲ့ကာလလို့ပဲ ပွောရပါလိမျ့မယျ။
အရာရာတိုငျး မိမိဆုံးဖွတျခကျြကိုပဲ ဦးစားပေးထားစခေငျြပါတယျ။ ဘယျသူ့စကားကိုမှနားမယောငျမိပါ စနေဲ့။ စပျတူအလုပျရှယျယာအလုပျမြားလုံးဝမကောငျးသေးပါဘူး။ မညျသူ့ဆီမှအကွံမတောငျးတာအကောငျးဆုံး ပါပဲ။ ဥပဒနေဲ့ငွိစှနျးတဲ့လုပျငနျးမြား ဒီကာလမှာအပွဈပေးအရေးယူခွငျးခံရတတျပါတယျ။ အလုပျသဈ စီးပှားသဈ စလိုကျမိပါက ဒီကာလမှာသခေငျြတဲ့ကြားတောပွောငျးဆိုတာမြိုးလို ဖွဈရပါလိမျ့မယျ။ မိခငျရဲ့ကနျြးမာရေးအားနညျး နတေတျတဲ့အတှကျ ဂရုစိုကျပေးလိုကျပါ။ မိမိကနျြးမာရေးကတော့ ဝမျးဗိုကျအစာအိမျနဲ့ ပကျသကျပွီး သတိထား ရပါလိမျ့မယျ။ အလုပျထဲမှာ ငှအေရမျးမွုပျနရေငျပွနျဖျောရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးကတော့ အကောငျးဆုံး ကာလထဲရောကျနတောပါ။အခဈြရေးမှာတော့ မလှနျကြူးမိပါစနေဲ့။ မဖုံနိုငျမဖိနိုငျတဲ့ ကိစ်စမြိုး တှရေ့ကွုံရတတျတဲ့ ကာလထဲရောကျနခြေိနျမို့ပါပဲ။ ပညာရေးအထူးကောငျးနပေါလိမျ့မယျ။ ပညာရပျတဈခုကိုစတငျသငျကွားဖို့ အကောငျးဆုံးကာလပါပဲ။
အဘကျဘကျကတိုးတတျအောငျမွငျနမေဲ့အခြိနျပါ။ အထူးသဖွငျ့ စီးပှားရေးနဲ့ပကျသကျပွီးအထူးကောငျးပါ လိမျ့မယျ။ ကိုယျပိုငျအလုပျမြား အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ဈေးဆိုငျမြား ဖောကျသညျသဈတိုးခွငျး ၊လူကခြွငျးမြိုးလဲ ကွုံရတှရေ့တတျပါတယျ။မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှရေဲ့ အကူအညီအထောကျအပံ့တှရေပါလိမျ့မယျ။ အဆကျ အသှယျကောငျးတှရေတတျပါတယျ။ ဒီကာလမှာခရီးသှားဖို့ကိစ်စတှလေဲ ကွုံရပါလိမျ့မယျ။ ဝနျထမျးမြားအလုပျနဲ့ ပကျသကျပွီး နယျခရီးသှားရခွငျးမြိုးတှရှေိတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးအကောငျးဘကျမှာရှိနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျကမြှရခြေိုးခွငျး ခေါငျးလြှျောခွငျးမြိုးတှေ မလုပျမိပါစနေဲ့။ အိမျထောငျရေးသာယာပြျောရှငျမဲ့ကာလပါပဲ။ အတူနေ မောငျနှမတှနေဲ့ အဆငျမပွတောမြိုးတော့ ရှိတတျပါတယျ။ အခဈြရေးကတော့ ခဈြသူရဲ့ဂရုဏာအကွငျနာ တှကေိုရရှိမဲ့ကာလပါပဲ။ ပညာရေးအထူးကောငျးပါတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အိမျစာအတူတူလုပျတာမြိုးကစာပို ရတတျတဲ့အခြိနျပါ။
ယတွာ မှေးနံထောငျ့ ပနျးအဖွူ ၅ပှငျ့လှူပါ။
ယတွာ နှားနို့ ဘုရားကပျလှူပါ။